Xagaaga inta lagu gudojiro cudurka aafada - Krisinformation.se
TB26 Sommar 2021 So
Cadeynta tallaalka, Koolada xagaaga, xadiiqadaha madadaalada? Waxa halkan ku yaala macluumaad ku saabsan waxa shaqeynaaya wakhtiga fasaxa xagaaga inta cudurka aafada lagu gudojiro
Uppdaterades 20 jul 2021 13:06
Safarada wadanka dibadiisa
Cadeynta tallaalka ee Midowga Yurub dhexdiisa
Cadeynta Tallaalka Covid ku waa dhokumenti lacag la'aan ah, dhijitaal ama warqad ah taas oo cadeynaysa in lagaa tallaalay covid-19. Waxay fikrada ka danbeysaa tahay in safarada wadanka dibadiisa ah ee Midowga Yurub dhexdooda ay kuu dhib yareyso. Waxa taasi Iswiidhan masuul ka ah hey'ada E-hälsomyndigheten taas oo ka masuul ah adeegga elektarooniga ah ee Cadeynta Tallaalka Covid ka.
Laga bilaabo bartamaha bisha Luulyo ayaad sidoo kale heli kartaa cadeyn tijaabada muujineysa inaan lagaa helin covid-19 ama cadeyn inaad ka bogsatay ah. Ugu danbeyn 12 Ogosto ayaad sidoo kale heli doontaa cadeyn inaad ka bogsadey ah. Waxa cadaynta in laga bogsadey loola jeedaa in la tusi karo tijaabo la iska qaadey ugu yaraa toban maalmood ka hor oo muujinaysa in covid-19-la qabo.
Safarada Midowga Yurub ka baxsan
Waxay Utrikesdepartementet dadka kala talineysaa safarada aan daruuriga aheyn ee lagu tagayo dhammaan waddamada, dhowr waddan oo ka reeban mooyaane. Ka reebanaanta waxay khuseysaa wadamada ku jira Midowga Yurub, EES iyo aaga Schengen, iyo sidoo kale Boqortooyada Ingiriiska, Australien, Israel, Nya Zeeland, Ruwaanda, Singapore, Koonfurta Kuuriya, Thailand iyo Japan., Albaniya, Libnaan, Waqooyiga Makedoniya, Serbiya, Maraykanka/USA, Hongkong, Macao och Taywan.
Wax dheeraad ah ka akhri Boggaga internedka ee Xukuumada. (Boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Hubi/eeg waxa ka shaqeynaaya wadanka aad u socoto. Waa adiga masuuliyadaada inaad hubiso inaad shuruudaha gelitaanka buuxineyso.
Wax dheeraad oo shuruudaha soo gelitaanka ee wadamada kala duduwna ku saabsan ka akhri Sweden Abroad (Boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Mamnuucid saaran soo gelitaanka safarada aan muhiimka aheyn ee Iswiidhan loogaga imanaayo wadamada Midowga Yurub ka baxsan badankooda. Waxa aanay mamnuucidu khuseynin muwaadiniinta Iswiidhishka ah ama muwaadiniinta wadan kale oo Midowga Yurub/EES ah ka socda iyo sidoo kale muwaadiniinta ka yimid dhowr wadan oo ka reeban.
Waxay Hay'ada Caafimaadka Bulshadu soo jeedinaysaa in qofka ka soo safraaya waddan ka baxsan wadamada Waqooyiga Yurub (Norden) uu tijaabada PCR ka iska qaado marka uu Iswiidhan yimaado. Waxay taasi khuseysaa xitaa haddii aanad calaamado lahayn. Talobixintu ma khuseyso dadka hal doos lagu tallaalay ugu yaraan seddex todobaad ka hor intaanay Iswiidhan imaanin. Waxaanay taasi sidoo kale khuseynin qofka lixdii bilood ee la soo dhaafay qaaday covid-19.
Waxaad macluumaad dheeraad ah oo wadamada ka reeban mamnuucista iyo waxyaalaha kale ee ka reeban ee shaqeynaaya ay ku jiraan bogga. Safarada wadanka dibadiisa. (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Safarada Iswiidhan gudaheeda ah
Hubi inaad si infegshanka amaan ka ah adigu ugu safarto.
Ha safrin haddii aad calaamado uu keeni karo covid-19 leedahay. (Boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Qorsheeya waxaad sameyneysaan haddii qof kooxda ka tirsan uu goob kale ku jirado. Haddii aad jirato: is tijaabi, is karantiimee oo sii joog ilaa iyo inta aad ka caafimaad qabeyso ama guriga ku soo laabo taas oo khatarta ugu yar ee aad dadka kale ku qaadsiineyso leh.
Faafitaanka infegshanka ayaa si degdeg ah isku bedeli kara goobta aad u safrayso. Hubi haddii ay jiraan talobixino gobol ahaaneed. (Boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Iska tallaal meesha aad degan tahay
Waxa la doorbidayaa inaad gobolka aad ka diiwaan gashan tahay iska talaasho, maadaama oo tallaalka gobolada loo qoondeeyey si ku saleysan diiwaanka dadweynaha. Laakiin haddii aad tusaale ahaan ka shaqayso ama aad wax ka barato meel kale ayay jirtaa fursada aad iskaga tallalayso gobol kale.
Waa inaad isku daydo inaad labada jeerba isla hal rug caafimaad iska tallaasho. Taasi waa si maaraynta loogu fududeeyo iyo in loogu hubiyo in isla nooca tallaalka ee saxda ah laga heli karo marka laba dows lagu siinaayo.
Wax dheeraad ah ka akhri bogga internetka ee Folkhälsomyndigheten. (Boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan tallaalka waxa uu ku jiraa Krisinformation.se. (Boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Haddii ay saxmad/ciriiri badan ka jirto goobta dabaasha ka fikir inaad meel kale aado ama wakhti kale dib ugu soo laabato.
Waxa barkadaha dabasha khuseeya sharciga Covid-19 ("Sharciga Cudurada aafada") iyo xeerarka la xiriira. Waxay taas micnaheedu tahay in qofka waxqabadka masuulka ka ah uu hubiyo inay suurtogal tahay in saxmada laga hortago.
Talooyinka Folkhälsomyndigheten ee goobaha dabaasha khuseeya. (Boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Macluumaadka guud ee ku saabsan goobaha dabaasha iyo biyaha dabaasha (Boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Deegaanka tixgalin sii
Intii uu cudurka aafada ahi socday ayaa dad badani xilliyada firaaqadooda deegaanka aadeen. Miyaad adigu sidoo kale dooneysaa inaad ku raaxeysato deegaan aan la qashqashin, qashin laheyn, saxmad laheyn oo aanay baarkinka fowdo ka jirin? Waxay Hey'adda Ilaalinta Deegaanka (Naturvårdsverket) haysaa talooyin ku saabsan nolosha guriga dibaddisa oo waarta.
Talooyinka waxa laga helayaa Boggaga internedka ee Naturvårdsverket. (Boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Kaamamka xagaaga iyo koobabka tartamada isboortiga
Waxa laga bilaabo 1 Juunyo la ogol yahay in la qabto kaamamka xagaaga iyo koobabka tartamada isboortiga. Waa in cida qabqaabineysaa ay qaado talaabooyin si loogu yareeyo faafitaanka fayruska. Kaamamka iyo koobabka tartamada isboortiga waa in loo qabto si kooxo kooxo yar oo aan la is dhexgalin.
Xadiiqadaha madadaalada iyo beeraha xayawaanka
Dhowr ka mid ah xadiiqadaha madadaalada iyo beero xayawaan ayaa raba inay martidu xilliga xagaaga horay wakhti u sii xajistaan. Wakhti fiican sii qorshee booqashadaada oo eeg waxyaalaha khuseeya xadiiqada aad booqaneyso.
Waxa laga yaaba in qofka buuraha dul lugeynayaa uu u baahdo inuu sii qabsado oo uu joogitaanka guryaha yarya ee buuraha iyo saldhigyada buuraha horey lacagtooda u sii bixiyo. Svenska Turistföreningen, STF, ayaa waxyaalahaasi ka mid yihiin waxyaalaha shuruudaha xagaaga 2021 ah. Wax dheeraad ah ka akhri Boggaga internedka ee STF: s . (Boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)